सामसुङ्ग ग्यालेक्सी नोट7समिक्षा - समाचार नियम
सामसुङ्ग ग्यालेक्सी नोट7समिक्षा
सैमसंग ग्यालेक्सी नोट7छ, निस्सन्देह, सबै भन्दा राम्रो phablet जाँदै. यो शक्तिशाली छ, Gimmicks को बाटो मा उपयोगी सुविधाहरू पूर्ण र साना, र प्रदान अरूलाई उत्पादकत्व उपकरण बस छैन.
सबै भन्दा राम्रो phablet जा अब पनरोक छ, एक शानदार बाङ्गो स्क्रिनमा, राम्रो लेखनी र खुर क्यामेरा, संकीर्ण मा र्याप, प्रिमियम शरीर
शीर्षक यो लेख “सामसुङ्ग ग्यालेक्सी नोट7समीक्षा: को phablets लाभ राजा” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, लागि बिहीबार 25 अगस्ट theguardian.com 2016 06.00 UTC
यो ग्यालेक्सी नोट7यो लेखनी-सुसज्जित phablets को सैमसंग राजा लागि बेलायत गर्न फिर्ती छ, तर कसैले साँच्चै लेखनी अब चाहनुहुन्छ?
भने पनि जवाफ "कुनै" छ र तपाईँले "एस पेन" छुन कहिल्यै, नोट7अरू कुरा प्रदान गर्दछ. यो कुनै पनि आकार को पहिलो फोन प्रयोगकर्ता निर्मित इन्फ्रारेड आइरिस स्क्यानर आफ्नो आँखा प्रयोग अनलक गर्न सक्ने को छ.
बाङ्गो अगाडि र पछाडि
अगाडि र पछाडि दुवै किनाराको मा घुमेको छन्, संकीर्ण उपकरण लागि बनाउने, स्क्रिन गरेको 5.7in विकर्ण आयाम बावजुद. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
नोट7को को थूकना छवि छ ग्यालेक्सी S7 एज. एक बाङ्गो स्क्रीन पक्ष तिर तल bends र एक गिलास फिर्ता अगाडि यस्तै फेसनमा राउण्ड छ. त्यहाँ बाहिर वरिपरि एउटा सानो धातु ब्यान्ड छ. छेउ-छेउमा मात्र स्पष्ट भिन्नता छ कि नोट छ7धेरै अलिकति ठूलो छ.
यो 7.9mm बाक्लो छ, 153.5मिमी अग्लो र 73.9mm व्यापक. यो S7 किनारा 0.2mm पतली छ, 2.6छोटो मिमी र 1.3mm साघुँरो. नोट7पनि 169g मा भारी 12g छ, डक को लेखनी संग. मतभेद प्रयोगमा नगण्य छन्, जो नोट बनाउँछ7प्रयोग गर्न सजिलो ठूलो फोन को एक, र यसको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी बनाउँछ, स्याउ आईफोन 6s प्लस र नेक्सस 6P, लगभग हरेक आयाम पट्टी मोटाइ मा सकारात्मक बोसो हेर्न – iPhone र नेक्सस दुवै 7.3mm बाक्लो छन्.
यो बाङ्गो स्क्रिन किनारा कार्यात्मक भन्दा बढी सौंदर्य छन्, तर एक संकीर्ण चौडाई नोट समातेर बनाउँछ जो कायम राख्न मदत7यति लगभग कुनै पनि अन्य phablet भन्दा सजिलो. यो हातमा ठूलो महसुस, किनाराको मा शोधन को एक स्तर संग, माल र आकार कुनै पनि अघिल्लो नोट परे.
यो 5.7in ट्रयाक्टर HD AMOLED स्क्रीन brightest को छ, clearest र सबै भन्दा राम्रो म कहिल्यै स्मार्टफोनबाट देखेका छौँ, inky अश्वेतहरुको र बोल्ड रंग संग. यो बाहिर स्पष्ट देखिने छ, जो अक्सर सजिलै बाहिर धोएर OLED आधारित स्क्रीन लागि उल्लेखनीय छ, र पनि पहिले नै गर्न सज्जित भन्दा राम्रो छ उत्कृष्ट S7 एज.
नोट7पनि जसको लागि 1.5M अर्थ IP68 स्तर पनरोक छ 30 ताजा पानी मा मिनेट. यो बन्दरगाह खुला छन्, जो कुनै fiddly ढोका अर्थ, यो लेखनी स्लट र यसको एस पेन सहित, जो अहिले पनि स्क्रिनमा पानी काम गर्न सक्छन्.
पर्दा: 5.7ट्रयाक्टर HD AMOLED मा (518ppi)
प्रोसेसर: octa-कोर सैमसंग Exynos 8890 वा ट्रयाक्टर-कोर Qualcomm Snapdragon 820
राम: 4राम जीबी
भण्डारण: 64जीबी + microSD कार्ड
संचालन प्रणाली: एन्ड्रोइड 6.0.1 TouchWiz संग
क्यामेरा: 12OIS संग सांसद पछि क्यामेरा, 5सांसद सामने-सामना क्यामेरा
जडान: LTE, वाइफाइ, NFC, USB-सी, वायरलेस चार्ज, ब्लूटूथ 4.2 र जीपीएस
आयाम: 153.5 x 73.9 x 7.9 मिमी
वायरलेस चार्ज र एक दिनको ब्याट्री
नीलो र सुन नोट7शरीरका धेरै आकर्षक छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
नोट7एउटै प्रोसेसर छ, ग्राफिक्स र राम रकम को S7 किनारा रूपमा र यस्तै कार्य.
को S7 किनारा जस्तै, नोट7शिघ्र छ र तीव्र गतिमा यो तपाईं फेंक सक्छ धेरै ज्यादा केहि मार्फत crunches. यो कार्यक्रम बीच विशेष sprightly लोड र स्विच महसुस. विभाजन-स्क्रिन multitasking पनि यसलाई सुस्त छैन, हुनत एक 5.7in स्क्रिनमा यो को उपयोगिता debatable छ.
ब्याट्री जीवन अलिकति निराशाजनक छ. नोट7शुल्क साँच्चै छिटो, मार 70% मा 50 समावेश युएसबी-सी छिटो चार्जर मार्फत मिनेट, तर ब्याट्री विशेष उपचार बिना एक दिन भन्दा धेरै टिक्न छैन.
मेरो प्राथमिक उपकरणको रूपमा यसलाई प्रयोग, ब्लुटुथ हेडफोन मार्फत संगीत को पाँच घण्टा सुन्न, पुस इमेल सयौं तीन घण्टा ब्राउजिङ र प्रयोग अनुप्रयोगहरू र 30 प्रकाश खेल को मिनेट, नोट7दिन दुई मा 8am सम्म एक दिन मा 7am देखि चली.
वायरलेस चार्ज फर्नीचर को एक टुक्रा मा निर्मित 5W प्याड मा राम्रो तरिकाले रातारात काम. ब्याट्री बचत मोड, ती राख्नु अनुप्रयोगहरू अनुगमन र ती सहित तपाईं शक्ति प्रयोग गरेर रोक्न सुत्न प्रयोग नगर्नुहोस्, निर्माण गरिएका छन् र म प्रक्रिया साथ रोल्ड रूपमा बिस्तारै सुधार गर्न ब्याट्री जीवन फेला.
यो ब्याट्री जीवन वरिपरि वृद्धि गर्न अपेक्षित छ टिप्पण लायक पनि छ 10%-20% संग रोल एन्ड्रोइड बाहिर 7.0 नूगा.
अनुप्रयोगहरू, मान्छे र कार्य किनारा गर्ने बाङ्गो स्क्रिनको छेउमा एउटा सानो ट्याप देखि बाहिर हाल्छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
नोट7को नै परिमार्जन संस्करण चल्छ एन्ड्रोइड 6.0 Marshmallow भनिन्छ TouchWiz को S7 किनारा रूपमा, तर थपिएको संग लेखनी समर्थन गर्न.
एन्ड्रोइड गर्न सैमसंग गरेको परिमार्जन अधिकांश राम्रो हो, विशेष गरी एन्ड्रोइड रूपमा 6.0 Marshmallow छ अब मिति बाहिर. यो थप द्रुत सेटिङहरू छ, थप शक्ति बचत सुत्न प्रयोग नगरिएको अनुप्रयोगहरू पहिचान र राख्न प्रणाली सहित मोड, यो कम्पन शक्ति सहित सूचनाहरू भन्दा व्यापक नियन्त्रण, र एक निर्मित nighttime प्रयोगको लागि नीलो प्रकाश फिल्टर.
सूचना छाया मा सानो अडियो उत्पादन सेटिङहरू तपाईँले विभिन्न ब्लुटुथ उपकरणहरू बीचको उत्पादन स्विच गर्न अनुमति दिन्छ, हेडफोन र आन्तरिक वक्ता, केहि विच्छेद बिना.
सानो किनारा उपयोगिताओं संग्रह उपलब्ध छन्, चाँडै सम्पर्क वा अनुप्रयोगहरू पहुँच लागि उपयोगी, तर बाहिर सानो. तपाईंले तिनीहरूलाई उपयोगी छैन भने तिनीहरूले हटाउन सकिँदैन. Samsung गरेको खेल उपकरण खेल दृश्य रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, प्ले disrupting सूचनाहरू वा बटनहरू बन्द र ब्याट्री शक्ति बचत गर्ने स्मार्टफोन प्रदर्शन सीमित गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं एक खेल पनि यो पज बिना कम गर्न सक्छ.
यो सबै राम्रो छैन, तथापि. यो Upday को गृहस्क्रिनमा सामाजिक समाचार समष्टिकर्ता प्यानल (जो पहिले Samsung फोनहरुको मा Flipboard प्रतिस्थापित) म यसलाई बन्द त म रिस फेला. म पनि सैमसंग नयाँ क्लाउड सिंक सेवा संग बग भोगे, जो सैमसंग मुक्त 15GB क्लाउड भण्डारण गर्न फोन सामग्रीले अप पीठ, जो एन्ड्रोइड मिडिया सर्भर सेवा तेजी ब्याट्री कारण.
मिडिया सर्भर त्रुटिहरू सामान्य सैमसंग स्मार्टफोन संग, सामान्यतया विशेष एसडी कार्ड मा दूषित तस्बिरहरू सम्बन्धित, छैन हुनत यो मामला मा म समय मा स्थापित एक microSD कार्ड छैन रूपमा. बन्द सैमसंग क्लाउड सिङ्क सक्छ म पाउन को ब्याट्री गर्न मात्र समाधान पार्दै थियो. यो एक पूर्व-विज्ञप्ति उपकरण प्रयोग गरेर को परिणाम संभावना छ; यसलाई म संग थियो समय मा धेरै अपडेट पायो.
माइक्रोसफ्ट कार्यालय, स्काइप र OneDrive अनुप्रयोगहरू पूर्व-स्थापित आउन, जो असक्षम गर्न सकिन्छ तर स्थापना रद्द गर्न.
छोटो टिप्पणीहरू लेखन गर्दा स्क्रिन बन्द डिजिटल पोस्ट-यो टिप्पणी रूपमा धेरै सजिला छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
एन्ड्रोइड गर्न सैमसंग सफ्टवेयर ट्वीक्स को बाँकी एस पेन लेखनी समर्थन गर्ने हो, जो सबै भन्दा राम्रो सानो उपलब्ध styluses को छ. दबाब-संवेदनशील निब अघिल्लो संस्करण भन्दा एकदम सानो छ, जो यो सही महसुस, सारा सिस्टम लामो रूपमा धेरै उत्तरदायी हुँदा तपाईं एक सैमसंग अनुप्रयोग प्रयोग गरिरहनु भएको रूपमा.
Evernote मा लेखनी प्रयोग, उदाहरणका लागि, ढिलाइ को थोडा सजिलै देखिने थियो तर स्क्रिनमा महसूस थप कागज मा चित्रकला जस्तै धेरै बनाउने पनि सुधार गरिएको छ.
Samsung नयाँ नोट्स अनुप्रयोग एक ठाउँमा लेखनी को सबै भन्दा सुविधाहरू सँगै संकलन. हात-आकर्षित टिप्पणीहरू, पाठ, हस्तलिपि पहिचान, अडियो र तस्बिरहरू collated र Samsung क्लाउड समन्वयन गर्न सकिन्छ, तर दुःखको कुरा सैमसंग गरेको पुरानो एस नोट्स जस्तै Evernote छैन.
तपाईं अनुवाद लागि पाठ को द्रुत चयनको बनाउन लेखनी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिन एनोटेशन र उत्पादकत्व उपकरण को एक ठोस संग्रह प्रयोग. फोन सुतेको बेला एस पेन स्क्रिनमा काम गर्दछ, जो सैमसंग नोट्स सुरक्षित हुन्छ र एक पोस्ट-यो टिप्पणी जस्तै स्क्रिनमा पिन गर्न सकिन्छ.
स्क्रिन भिजेको छ जब लेखनी सबै सुविधाहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो यो पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ अर्थ, तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ भने. जब मा लेखनी नाउ फोनमा सफासँग प्रयोग.
यो लेखनी एकदम सानो चित्र चित्रकला लागि उपयोगी छ, चित्र या हस्तलिखित टिप्पणीहरू, तर धेरै भन्दा बढी. तर यो एक हत्यारा नयाँ सुविधा गर्छ: तत्काल GIF बनाउने. तपाईं गर्न को एक GIF बनाउन स्क्रिनको एक क्षेत्र रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ 15 सेकेन्ड.
औंठाछाप स्क्यानर एक घर बटन रूपमा युगल, युएसबी-सी पोर्ट संग – को लागि एक सैमसंग फोन पहिलो – तुरुन्तै तल. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सामने औंठाछाप स्क्यानर आकाशगंगा S7 किनारा जस्तै हो र ठोस छ, अधिकांश समय तत्काल मेरो औंला र औंठी चिनन. यो पनि अनुप्रयोगहरू सुरक्षित हुनेछ, खरिद र पासवर्ड, कुनै पनि अन्य Android Marshmallow वा पछि उपकरण जस्तै.
मेरो आँखामा हेर. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
नोट7आइरिस स्क्यानिङ सुविधा पहिलो स्मार्टफोन मध्ये एक छ, जो रेकर्ड गर्न र त्यसपछि आफ्नो irises असामान्य ढाँचाको मेल एक इन्फ्रारेड क्यामेरा प्रयोग. यो कि त वा दुवै आफ्नो आँखा मेल छौँ, र धेरै राम्रो तरिकाले काम गर्दछ, फोन अनलक वा दोस्रो भित्र केहि प्रमाणीकरण.
तपाईं लागि यो मजबूती काम गर्न यो आँखा स्तर सम्म जुटाउने छ, तर यो पनि सही उचाइ मा बन्द-केन्द्र नजर मलाई चिन्न हुनेछ. म चश्मा वा प्रयोग संपर्क लेंस लगाउने छैन.
यो रूपमा औंठाछाप स्क्यानर रूपमा सुविधाजनक छैन, र सक्रिय गर्न स्क्रिनमा एक स्वाइप अप आवश्यक, तर आफ्नो हात वा औंठाछाप स्क्यानर ढाकिएको हुँदा काम गर्दछ, जो हिउँदमा धेरै उपयोगी हुनेछ.
पछाडि 12-मेगापिक्सेल क्यामेरा अप्टिकल छवि स्थिरीकरण र तीव्र स्वतकेन्द्रित छ, साथै एक छिटो लेन्स रूपमा, बनाउने कम प्रकाश फोटोग्राफी को सबै भन्दा. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
नोट7आकाशगंगा S7 किनारा जस्तै अगाडि र पछाडि क्यामेरा छ, जो केही सर्वोत्तम एक स्मार्टफोन उपलब्ध छन्.
यो पछिल्लो 12-मेगापिक्सेल क्यामेरा छिटो छ, कम-प्रकाश मा ठूलो र गाह्रो गरिब फोटो लिन बनाउँछ. यो पनि RAW फोटो लिन सक्छ. अगाडि-सामना 5-मेगापिक्सेल Selfie क्यामेरा राम्रो छ, तर ठीक विवरण अभाव, केही थप चापलूसी पाउन सक्छन् नरम-देख फोटो उत्पादन.
यो सधैं-प्रदर्शन घडी र सूचनाहरू प्रदान गर्न सक्छन्, साथै Spotify वा अन्य संगीत अनुप्रयोगहरू बाट खेल के पढ्ने-बाहिर. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
फिर्ता ग्लास घर्षण को आश्चर्यजनक उच्च स्तर छ, जो सजिलो को पकड राख्न बनाउँछ, तर पनि यो एक औंठाछाप चुम्बक बनाउँछ
त्यहाँ पछाडि एक दिल को धडकन सेन्सर बल्लतल्ल कसैले स्वास्थ्य अनुगमन लागि रोजगार हुनेछ छ, तर यो एक Selfie क्यामेरा ट्रिगर रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
तपाईं केवल स्क्यानर मा चार औंलाहरु दर्ता गर्न सक्छन्
प्रदर्शन सधैं-समय देखाउँछ, मिति, पात्रो वा तस्बिर, तपाईँको सेटिङ आधारमा, र वा सेट घण्टा बीच बन्द गर्न रात मा तपाईं राख्न होइन निर्धारित गर्न सकिन्छ, वा पूर्ण बन्द
यो सधैं-प्रदर्शन (जो म मेरो ब्याट्री परीक्षण गर्नाले सक्रिय थियो) वरिपरि खपत 10-15% ब्याट्री प्रत्येक दिन जीवन को
नोट7म परीक्षण गर्नुभएको कुनै पनि स्मार्टफोन को बलियो संकेत थियो, तर ब्याट्री भोगे र लन्डन नियमित गाडिहरु को congested नेटवर्क अवस्थामा तातो पायो
सैमसंग ग्यालेक्सी नोट7लागत £ 700 र तीन रंग मा उपलब्ध छ: कालो, सुन पक्ष संग नीलो, र चाँदी.
तुलना लागि, को 5.5ग्यालेक्सी मा S7 किनारा लागत £ 639, को 5.7in गुगल नेक्सस 6P लागत £ 449 (64जीबी £ 499 छ) र 5.5एप्पल मा आईफोन 6s प्लस लागत £ 619 (64जीबी £ 699 छ), जो नोट बनाउँछ7शीर्ष अन्तमा प्रतिद्वन्द्वी जस्तै मूल्य बारे.
यो एस पेन तपाईं सबै समय प्रयोग हुन सक्छ केहि छ, तर मेरो लागि साँच्चै सजिला कम्तिमा एक पटक एक दिन आउँछ, र प्रयोगमा छैन जब सुरक्षित नाउ बाटो बाहिर, फोन को सौंदर्य वा समारोह देखि detracting छैन.
क्यामेरा, औंठाछाप स्क्यानर, वायरलेस चार्ज, waterproofing र स्क्रिन पनि शीर्ष निशान छन्. त्यसैले फिट छ, पूरा र उपकरणको महसुस. यो आइरिस स्क्यानर जाडो साथ रोल गर्दा बढी उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने एक नवीनता छ. तर यो नोट7का सर्वश्रेष्ठ बिट छन् कि स्क्रिन वरिपरि बाङ्गो किनारा र minuscule bezels छ.
तिनीहरू धेरै ठूलो फोन पनि पकड निकै ठूलो छैन महसुस बनाउन – यो स्क्रिन अचल सम्पत्ति त्यागी बिना कुनै पनि अन्य 5.7in phablet भन्दा बढी व्यवस्थित छ.
मात्र वास्तविक नकारात्मक, जो सैमसंग गरेको नोट श्रृंखला अगस्ट वरिपरि शुरू प्रत्येक त्यहि भएको छ, यसको सफ्टवेयर मिति सम्म अब छ कि छ. एन्ड्रोइड 7.0 नूगा धेरै सुधार छ सूचना र ब्याट्री जीवन मा. नोट7नूगा अद्यावधिक प्राप्त हुनेछ, तर जब अज्ञात छ.
पेशेवरों: पनरोक, बाङ्गो स्क्रिन र फिर्ता, औंठाछाप स्क्यानर, आइरिस स्क्यानर, वायरलेस चार्ज, microSD कार्ड स्लट, एस पेन, शानदार प्रदर्शन, उत्कृष्ट क्यामेरा
नकारात्मक: अझै एन्ड्रोइड छैन7नूगा, केवल एक दिनको ब्याट्री, महंगा
एक पुस-बटन क्लिक संग एस पेन फोन को तल मा स्लट. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सैमसंग ग्यालेक्सी S7 किनारा समीक्षा: यो पिटे गर्न स्मार्टफोन छ
गुगल नेक्सस 6P समीक्षा: उपलब्ध सर्वोत्तम phablet
आईफोन 6s प्लस समीक्षा: iPhone, भन्दा बल्लतल्ल राम्रो6थप
सैमसंग ग्यालेक्सी S6 किनारा + समीक्षा: को सुडौल 'आईफोन6थप हत्यारा '
गुगल एन्ड्रोइड 6.0 Marshmallow समीक्षा: थप पलिश, ठूलो नियन्त्रण र अब ब्याट्री जीवन
लेख, ग्याजेटहरू, मोबाइल फोन, Phablets, समीक्षा, samsung, शमूएल गिब्स, स्मार्टफोन, प्रविधि
← एन्ड्रोइड 7.0 नूगा समीक्षा स्याउ पनरोक आईफोन प्रकट7→